အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: ရွေးချယ်စရာ လမ်းနှစ်သွယ်
28 Responses to “ရွေးချယ်စရာ လမ်းနှစ်သွယ်”
အကောင်းမြင်စိတ်နဲ့ပဲ ဘ၀ကြီးကိုနေထိုင်သွားပါ့မယ် မချောရေ..။
စိတ်သည် တစ်ခါတစ်လေ အဆိုးမြင်၊ တစ်ခါတစ်လေအကောင်းမြင၏၊
အဆိုးမြငတာများတော့ အကောင်းမြင်အောင်လုပ်သည်၊ အကောင်းမြင်အောင်လုပ်ရင်း၊
အကောင်းမြင်တာများလာသည်၊ Balance လုပ်ရင်း အဆိုးမြငတာပြန်များလာပြန်သည်၊
အဲလိုပဲ Balance လုပ်ရင်းလုပ်ရင်းနဲ့၊ ……….ဘဝ….
နောက်ဆုံးတော့ ဆိုးရင်ဆိုးတယ် ကောင်းရင်ကောင်းတယ်ဆိုဲပြီး၊ ဝင်ထွက်လေးပဲမှတ်တဲ့၊
ကိုယ်တိုင် လမ်းနှစ်သွယ်ကိုကြုံချိန်မှာ စိတ်အေးအေးထားနိုင်ပါ့မလား...။
အကောင်းမြင်ဝါဒီ က အကောင်းဆုံးလို့ထင်ပါတယ် ၂ ဦး စလုံး အကျိုးရှိပါတယ်.
ဒီနေရာမှာ ပြောခဲ့ ချင်တာက
စိတ်ရဲ့ စွမ်းအား ဆိုတာပါပဲ။
မမြင်နိူင်ပေမဲ့အံ့ သြ ဘွယ်ရာ အစွမ်းထက်ပါတယ်။
စိတ် သာလျင် အဓိပတိ ပါတဲ့။
အလယ်မှာ တစ်လမ်း ထပ်ဖောက်မယ် မချောရေ။
အပြင်းအထန် ကြိုးစားတုန်းပါ...း)
ခုလို မနူးမနပ်အချိန်မှာတော့ လမ်းမှန်ကို လျှောက်မိဖို့က တော်တော်အေ၇းကြီးတယ်နော်.။
ဘယ်လမ်းမှ မလျှောက်ဘဲ ရပ်နေလို့ကော ရမလားဟင်း)
ငါမသေချင်သေးဘူး ငါအသက်ရှင်ချင်သေးတယ် .. (စာရေးကြည့်ချင်သေးတယ်)
မချော ဒါလေးလည်းကောင်းတာပဲ ..
စာကောင်းလေးတွေရေးတတ်လွန်းတဲ့ မချောရေ ကျေးဇူး
အကောင်းမြင်တတ်တဲ့စိတ်ကလေးရှိလို့ကတော့ သူများလဲ စိတ်ချမ်းသာ
မှတ်သားစရာလေး တစ်ခုရသွားပြန်ပါပြီ မချော ရေ..
မမ ရေ ဖတ်သွားပါတယ်၇ှင်..........
အဲဒီအကောင်းမြင်စိတ်မထားတဲ့ အဆိုးမြင်ဝါဒီတွေကြောင့်ပဲ ဒေါသတကြီးပို့စ်တစ်ပုဒ်ကိုတင်လိုက်ရပြန်ပြီ မချောရေ
ဖတ်တော့ ဖတ်ဖူးသလိုပဲ.. ပြန်ဖတ်သွားပါတယ်.. :)
လောကမှာရွေးချယ်စရာဆိုတာတစ်ချိန်းတည်းမှာ၂ခု၂ခု အမြဲတန်းကြုံတွေ့တတ်ကြပါတယ်။ ကိုယ်ရွေးချယ်တဲ့လမ်းဟာ အကောင်းဆုံးလို့ထင်တတ်ကြတယ်။ တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကိုေ၇ွးချယ်ရာမှာ တစ်ဖက်ကိုအားသာသွားလို့တစ်ဘက်ကကောင်းမွန်သွားပေမဲ့ တစ်ချို့ကိစတွေမှာ တစ်ဖက်ကနင့်နေအောင်ခံခဲ့ကြတာကိုယ်လည်းသတိထားရမယ်။ လမ်း ကို(အခွင့်အရေး)လို့ကျွန်တော်အဓိပါယ်ဖွင့်ချင်တယ်။ လမ်းမှန်ကိုယ်ေ၇ွးချယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားနိုင်ပါစေဗျာ အားလုံးပဲ..
ယူတတ်ရင် ယူချင်စရာလေးပါ။ လူတိုင်းမှာ အကောင်းမြင်စိတ်ထက် မကောင်းမြင်စိတ်က ပိုများတတ်တယ်လေ။ ငါက ဒီလောက်အကောင်းမြင်နေတာတောင် သူက ငါ့ကို မကောင်းမြင်တယ်လို့ ပြောပြောနေတတ်ကြတဲ့သူတွေ တွေ့ဘူးတယ်။ အမှန်က အဲဒီလို တွေးနေတာကိုက မကောင်းမြင်စိတ်ဘဲ မဟုတ်လား။ ကျနော်လဲ အိပ်ရာထပြီးရင် လမ်းနှစ်သွယ်ထဲက အကောင်းမြင်စိတ်ကို ရွေးချယ်မိဖို့ ကြိုးစားပါဦးမယ်။
တကယ်ကို ကောင်းမွန်တဲ့ ပိုစ့်ကောင်းလေး တစ်ပုဒ်ပါပဲ။ ကျွန်တော့်ဘဝမှာ ရွေးချယ်စရာတွေ ကြုံလာတိုင်း ဒီပိုစ့်လေးကို အမြဲအမှတ်ရနေပါ့မယ်။ ဒီကိုလာတိုင်း ဗဟုသုတ တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခု ရတယ်။ အဲဒီအတွက်လဲ မချောကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အမြဲတမ်း ကောင်းတဲ့ဘက်က တွေးတယ်၊ အနဲဆုံးတော့ စိတ်ချမ်းသာတာပေါ့ ညီမချောရယ်၊ ဘဝက တိုတိုလေးရယ်နော်....။ အရေးအသားရော၊ ပေးချင်တဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျပါ ပေါ်တဲ့ ဘာသာပြန် စာကောင်းလေးတပုဒ်၊ ညီမချော ရေးဟန် ထုံးစံအတိုင်း ညက်ညက်ကလေး ဖတ်ကောင်းတယ်....:)
facebook မှ share လိုက်ပီ။ ဘာလုပ်ချင်လဲ။
ကံကြမ္မာကို မလွန်ဆန်နိင်ရင်တောင် ရှင်သန်ခဲ့ချိန်မှာ အကောင်းမြင်စိတ်နဲ့
နေထိုင်ခဲ့တာကိုက တခြားသူတွေထက်ကို ထိုက်တန်နေတာပါပဲ။
ရွေ့လျားနေတဲ့ နာရီ မိနစ်တိုင်းမှာ စိတ်ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းမှုကြောင့်
ဒီပိုစ့်လေးအတွက် တကယ်ကို ကျေးဇူးပါ မမ....
အကောင်းမြင်ဝါဒ ...... ပါဠိလိုဆို ယောနိသော မနသိကာရ လို့ ဆိုမလားပဲ။
သင့်တင့်သောစိတ်နဲ့ နှလုံးသွင်းခြင်း ... တဲ့။ အဲဒီလို စိတ်ထားဖို့ သိပ်အရေးကြီးတယ် နော်။
အဆိုးမြင်တတ်တဲ့ အမကို အဖေက အမြဲ သတိပေးတယ် ယောနိသော ထားပါ ... တဲ့။
ခုထိတော့ ကြိုးစားနေတုန်းပဲ ........ ။
Positive Thinking အကြောင်းကို ထိထိမိမိတင်ပြထားတာလေးပဲ။